လတ် တလော လူနာ တွေ ဆေးရုံ မသွား ဘဲ အိမ်မှာ ပဲ ဘာ လို့ အသေခံ နေကြတာ လဲ? – Cele Posts
အရေးပေါ်လူနာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဗစ်လူနာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးရုံသွားတဲ့ အခါမှာ မျှော်လင့်ချက်က နှစ်ခု တည်းရှိပါတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါကို ကုသမှုခံ ယူနိုင်ဖို့ရယ်၊ သက်တောင့် သက်သာရှိဖို့ရယ်ပါ။ ပထမ တစ်မျိုးက ပိုအရေးကြီးပြီး ဒုတိယတစ်ခု ကတော့ ရနိုင်ရင် လိုချင်ကြပါတယ်။ လူကောင်းတစ်ယောက် တောင် သက်တောင့်သက်သာ နေချင်တာပဲဗျာ။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ချင်တာပေါ့။ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ အဲဒီနှစ်ခုကို ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆေးရုံလာပြကြပါလို့ ခေါ်နေစရာတောင်မလိုပါဘူး။ အားကိုးစရာဒါပဲရှိတော့ မဖြစ်မနေကို လာကြမှာပါ။
အခုဘာလို့ လူနာတွေက အိမ်မှာနေပြီးသာ အသေခံချင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတော့ အဲဒီအခြေခံ အချက် နှစ်ချက်ကိုတောင် မရနိုင်လို့ပါ။ အရေးပေါ်လူနာတစ်ယောက် ဆေးရုံရောက်တယ်။ အရေးပေါ်ကုသမှု တွေအရင်မရဘဲ ကိုဗစ်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးဖို့ ရက်နဲ့ချီစောင့်ရတယ်၊ စောင့်ရတာကလည်း သက်တောင့် သက်သာ မဟုတ် လူတွေပြည့်လျှံနေတဲ့အခန်းထဲမှာ စောင့်ရတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုတွေ မျက်နှာမမြင်ရဘဲ သေသွားတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ အများစုက သေခါမှ သေရော အိမ်မှာပဲ သက်တောင့်သက်သာ မိသားစုဘေးမှာထားပြီး သေလိုက်ချင်တော့တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပါ တိုက်တွန်းနေလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရချိန်မှာ တကယ်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့နေရာကို ဘယ်လိုပြောပြောသွားကြမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြုံရဆုံရမယ့် ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်ကြလွန်းလို့သာ အိမ်မှာပဲ အသေခံမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတာ။
ဆေးရုံတွေမှာ ဘာလို့ အဲဒီလောက်ထိ ကျပ်ညပ်ကုန်ရတာလဲ။ တစ်ရက်က ကိုဗစ်အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ မှာလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခေါင်းသေးသေးလေး ရဲ့ အမြင်မှာ အချက် သုံးချက်ရှိတယ်။
၁။ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန် (GP) တွေကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ထဲကို မထည့်နိုင်ဘူး။
ကိုဗစ်ဖြစ်တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၇ လကျော်လာပြီ အခုချိန်ထိ ဂျီပီတွေမှာ ဖွင့်ရမှာလား ပိတ်ရမှာလားမသဲကွဲဘူး။ တိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေ ဗျူဟာတွေလည်း မချပေးဘူး။ မင်းတို့ကြိုက်တာလုပ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး။ အကာအကွယ် အပြည့်နဲ့ ကုသမှုပေးတဲ့ဂျီပီတွေကိုလည်း လူနာပေါ့စတစ်ဖြစ်တာနဲ့ Q ဝင်ခိုင်း။ ဆေးခန်းပိတ်ခိုင်း။ ဒီတော့ ဂျီပီအများစုက ဆေးခန်းမဖွင့်တော့ဘူး။ လူနာကုသမှုတွေမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ လူနာတွေက ဘယ်ကိုရောက်သွားမယ်ထင်လဲ။ ရောဂါမှန်သမျှက ဘယ်မှမသွားအိမ်မှာသေရင်သေ ဒါမှမဟုတ် ဆေးရုံကြီးကို စုပြုံရောက်။
၂။ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူး။ ကုသမှုလမ်းကြောင်းထဲ ထည့်ပြီး ဝန်မျှမယူခိုင်းဘူး။
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေ အများကြီး။ သူတို့ရဲ့ လူနာလက်ခံနိုင်မှုအင်အားက ထောင်နဲ့ချီ ရှိတယ်။ အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်ဆေး မှုတွေ ကုသမှုတွေတောင် ပြုလုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ်လူနာကို လက်ခံကုသတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှု တွေပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက သူတို့အားကိုမယူဘူး။ ကိုဗစ်လူနာတွေ့တာနဲ့ ဆေးရုံပါလော့ဒေါင်းချပစ်တယ်။ ကိုဗစ်စစ်ဆေးဖို့ကို ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကိုပေးမလုပ်ဘူး။ ဒီတော့သူတို့က လူနာအသစ်တွေလက်မခံတော့ဘူး။ ကိုဗစ်သံသယနည်းနည်းလေးရှိတာနဲ့ လုံးဝကုသမှုမပေးတော့ဘူး။ ဒီတော့ အရေးပေါ်လူနာမှန်သမျှ ဘယ်ကိုရောက်လဲ။ အစိုးရဆေးရုံတွေကိုရောက်တယ်။ အပြင်မှာကိုဗစ်မစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စစ်ဆေးမှုတွေအကုန် လူနာတွေအကုန် အစိုးရဆေးရုံရောက်တယ်။ ဒီမှာတင်ထပ်ပြီးပြည့်လျှံကုန်တော့တာပဲ။ နဂိုအားဖြင့် အစိုးရဆေးရုံကိုမသွားကြတဲ့သူတွေတောင် အခုရောက်လာတော့ မနိုင်တဲ့ဝန်က နောက်ထပ် နှစ်ဆမတိုးဘူးလား။
၃။ အသစ်တွေတိုးချဲ့နေပေမယ့် ရှိရင်းစွဲတွေကို ဝန်ဆောင်မှုမတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ဘူး။
အပေါ်က နှစ်ချက်မှာ ဂျီပီတွေမကြည့်ပေးနိုင်တော့ တာရယ် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေ တာဝန်မယူတော့ တာရယ်ကြောင့် အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ ဝန်သုံးဆလောက် တိုးတယ်။ ဝန်တိုးလာပေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အင်အားမှာကျ ဖြည့်တင်းမှု တွေ ထင်သလောက်မရဘူး။ Q စင်တာအသစ်တွေတိုးချဲ့နေပေမယ့် လူနာလက်ခံမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးလို မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးလိုနေရာတွေမှာတော့ ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်လာဘူး။ ကိုဗစ်စဖြစ်ကတည်းက လူနာတွေအများကြီးလက်ခံနေရတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ကုသမှုဌာန ကိုဗစ် လက်ခံနေရာဟာ အစကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ ဒီအတိုင်းပဲ။ အခုဆိုရင် ဆေးရုံရောက် တာနဲ့ နည်းနည်းလေး သံသယရှိနေရင်တောင် တခြားအရေးပေါ်ကုသမှုတွေထက်အရင် ကိုဗစ်စစ်ဆေးရတယ်။ စစ်ဆေးမှုကလည်း ချက်ခြင်းမဟုတ် ရက်နဲ့ချီစောင့်ရတယ်။ သေမယ့်လူနာဆို ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ သေပေတော့ပဲ။ ဒီတော့ လူနာတွေခမျာ နှစ်ထပ်ကွမ်းနစ်နာရရှာပါတယ်။
လူနာတွေအိမ်မှာကျိတ်မကုစေချင်ရင် ဆေးရုံကို တကယ်အားကိုးလို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ် လာစေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဟာလေး တွေကို ပြုပြင်ပေးလို့ရတာပဲ။
၁။ ဂျီပီတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို အတူထမ်းပေးနိုင်မယ့် ဗျူဟာနဲ့ နည်းစနစ်တွေချမှတ်ပေးပါ။ လူနာတွေမှာ ဆေးခန်းသွားချင်ကြရှာပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေလည်းကုသမှုပေးချင်ကြရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ စနစ်တကျမရှိ တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာဖြစ်နေတော့ ကုရမှာလား ပိတ်ရမှာလားမသိဖြစ်နေကြရတယ်။
၂။ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေရဲ့ အင်အားကို ယူပေးပါ။ သူတို့ကို ကုသဖို့အတွက် ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပေးပါ။ ဆေးရုံလိုနေရာမျိုးကို လူနာတစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့ အကုန်ပိတ်ဆိုတာမျိုးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်အောင် ခွင့်ပေးပါ။ အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်နေကြတဲ့သူတွေကို ကိုဗစ်လိုအရာမျိုး စစ်ဆေးခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ နည်းလမ်းမကျဘူး။
၃။ စင်တာအသစ်တွေတိုးချဲ့သလိုမျိုးပဲ ရှိရင်းစွဲနေရာတွေရဲ့ အင်အားတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း တိုးချဲ့ပေးပါ။ ဘက်ဂျက်အကန့်အသတ်မဲ့သုံးစွဲမယ်ပြောပြီး စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့အရေးပေါ်ဌာနတွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲဆိုတာ တော်တော်ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။
ဘယ်သူမှတော့ အိမ်မှာနေပြီး အသေမခံချင်ပါဘူး။ ကုသမှုတွေရမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဆေးရုံသွားကြမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေ မြင်ကြားသိနေရတာတွေအရတော့ ကျွန်တော်အခုချိန် တစ်ခုခုဖြစ်လည်း အိမ်မှာပဲ အသေခံသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပါပဲ။ (ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း)
လတျ တလော လူနာ တှေ ဆေးရုံ မသှား ဘဲ အိမျမှာ ပဲ ဘာ လို့ အသခေံ နကွေတာ လဲ?
အရေးပျေါလူနာ ပဲဖွဈဖွဈ ကိုဗဈလူနာပဲဖွဈဖွဈ ဆေးရုံသှားတဲ့ အခါမှာ မြှျောလငျ့ခကျြက နှဈခု တညျးရှိပါတယျ။ ဖွဈနတေဲ့ ရောဂါကို ကုသမှုခံ ယူနိုငျဖို့ရယျ၊ သကျတောငျ့ သကျသာရှိဖို့ရယျပါ။ ပထမ တဈမြိုးက ပိုအရေးကွီးပွီး ဒုတိယတဈခု ကတော့ ရနိုငျရငျ လိုခငျြကွပါတယျ။ လူကောငျးတဈယောကျ တောငျ သကျတောငျ့သကျသာ နခေငျြတာပဲဗြာ။ နာမကနျြးဖွဈနတေဲ့သူတှဆေိုရငျ ပိုပွီးတော့ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈခငျြတာပေါ့။ အစိုးရဆေးရုံတှမှော အဲဒီနှဈခုကို ရနိုငျမယျဆိုရငျ ဆေးရုံလာပွကွပါလို့ ချေါနစေရာတောငျမလိုပါဘူး။ အားကိုးစရာဒါပဲရှိတော့ မဖွဈမနကေို လာကွမှာပါ။
အခုဘာလို့ လူနာတှကေ အိမျမှာနပွေီးသာ အသခေံခငျြတော့တယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးဖွဈနရေတာလဲ ဆိုတော့ အဲဒီအခွခေံ အခကျြ နှဈခကျြကိုတောငျ မရနိုငျလို့ပါ။ အရေးပျေါလူနာတဈယောကျ ဆေးရုံရောကျတယျ။ အရေးပျေါကုသမှု တှအေရငျမရဘဲ ကိုဗဈဟုတျမဟုတျ စဈဆေးဖို့ ရကျနဲ့ခြီစောငျ့ရတယျ၊ စောငျ့ရတာကလညျး သကျတောငျ့ သကျသာ မဟုတျ လူတှပွေညျ့လြှံနတေဲ့အခနျးထဲမှာ စောငျ့ရတယျ။ ကိုယျ့မိသားစုတှေ မကျြနှာမမွငျရဘဲ သသှေားတဲ့သူတှလေညျး အမြားကွီးပဲ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဆိုရငျတော့ အမြားစုက သခေါမှ သရေော အိမျမှာပဲ သကျတောငျ့သကျသာ မိသားစုဘေးမှာထားပွီး သလေိုကျခငျြတော့တယျဆိုတာတှဖွေဈလာတယျ။ ကြှနျတျောတို့အိမျမှာနပေါ တိုကျတှနျးနလေို့ မဟုတျဘူးနျော။ ရောဂါဝဒေနာခံစားနရေခြိနျမှာ တကယျအကူအညီပေးနိုငျတဲ့နရောကို ဘယျလိုပွောပွောသှားကွမယျ့သူတှခေညျြးပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကွုံရဆုံရမယျ့ ဒုက်ခကိုမခံစားနိုငျကွလှနျးလို့သာ အိမျမှာပဲ အသခေံမယျဆိုတာတှဖွေဈလာတာ။
ဆေးရုံတှမှော ဘာလို့ အဲဒီလောကျထိ ကပျြညပျကုနျရတာလဲ။ တဈရကျက ကိုဗဈအကွောငျးဆှေးနှေးပှဲ မှာလညျး ကြှနျတျောပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ခေါငျးသေးသေးလေး ရဲ့ အမွငျမှာ အခကျြ သုံးခကျြရှိတယျ။
၁။ အထှထှေရေောဂါကုဆရာဝနျ (GP) တှကေို ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု လုပျငနျးစဉျထဲကို မထညျ့နိုငျဘူး။
ကိုဗဈဖွဈတာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ၇ လကြျောလာပွီ အခုခြိနျထိ ဂြီပီတှမှော ဖှငျ့ရမှာလား ပိတျရမှာလားမသဲကှဲဘူး။ တိကတြဲ့လမျးညှနျမှုတှေ ဗြူဟာတှလေညျး မခပြေးဘူး။ မငျးတို့ကွိုကျတာလုပျ ကိုယျဖွဈကိုယျခံဆိုတဲ့အနအေထားမြိုး။ အကာအကှယျ အပွညျ့နဲ့ ကုသမှုပေးတဲ့ဂြီပီတှကေိုလညျး လူနာပေါ့စတဈဖွဈတာနဲ့ Q ဝငျခိုငျး။ ဆေးခနျးပိတျခိုငျး။ ဒီတော့ ဂြီပီအမြားစုက ဆေးခနျးမဖှငျ့တော့ဘူး။ လူနာကုသမှုတှမေလုပျပေးနိုငျတော့ဘူး။ ဒီတော့ လူနာတှကေ ဘယျကိုရောကျသှားမယျထငျလဲ။ ရောဂါမှနျသမြှက ဘယျမှမသှားအိမျမှာသရေငျသေ ဒါမှမဟုတျ ဆေးရုံကွီးကို စုပွုံရောကျ။
၂။ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတှကေို လုပျပိုငျခှငျ့မပေးဘူး။ ကုသမှုလမျးကွောငျးထဲ ထညျ့ပွီး ဝနျမြှမယူခိုငျးဘူး။
ရနျကုနျမှာဆိုရငျ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတှေ အမြားကွီး။ သူတို့ရဲ့ လူနာလကျခံနိုငျမှုအငျအားက ထောငျနဲ့ခြီ ရှိတယျ။ အရမျးရှုပျထှေးတဲ့စဈဆေး မှုတှေ ကုသမှုတှတေောငျ ပွုလုပျနတေဲ့ ဆေးရုံတှေ အနနေဲ့ ကိုဗဈလူနာကို လကျခံကုသတာပဲဖွဈဖွဈ ကိုဗဈစဈဆေးမှု တှပွေုလုပျတာပဲဖွဈဖွဈ သူတို့လုပျနိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစိုးရက သူတို့အားကိုမယူဘူး။ ကိုဗဈလူနာတှတေ့ာနဲ့ ဆေးရုံပါလော့ဒေါငျးခပြဈတယျ။ ကိုဗဈစဈဆေးဖို့ကို ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတှကေိုပေးမလုပျဘူး။ ဒီတော့သူတို့က လူနာအသဈတှလေကျမခံတော့ဘူး။ ကိုဗဈသံသယနညျးနညျးလေးရှိတာနဲ့ လုံးဝကုသမှုမပေးတော့ဘူး။ ဒီတော့ အရေးပျေါလူနာမှနျသမြှ ဘယျကိုရောကျလဲ။ အစိုးရဆေးရုံတှကေိုရောကျတယျ။ အပွငျမှာကိုဗဈမစဈဆေးနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ စဈဆေးမှုတှအေကုနျ လူနာတှအေကုနျ အစိုးရဆေးရုံရောကျတယျ။ ဒီမှာတငျထပျပွီးပွညျ့လြှံကုနျတော့တာပဲ။ နဂိုအားဖွငျ့ အစိုးရဆေးရုံကိုမသှားကွတဲ့သူတှတေောငျ အခုရောကျလာတော့ မနိုငျတဲ့ဝနျက နောကျထပျ နှဈဆမတိုးဘူးလား။
၃။ အသဈတှတေိုးခြဲ့နပေမေယျ့ ရှိရငျးစှဲတှကေို ဝနျဆောငျမှုမတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျဘူး။
အပျေါက နှဈခကျြမှာ ဂြီပီတှမေကွညျ့ပေးနိုငျတော့ တာရယျ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတှေ တာဝနျမယူတော့ တာရယျကွောငျ့ အစိုးရဆေးရုံတှမှော ဝနျသုံးဆလောကျ တိုးတယျ။ ဝနျတိုးလာပမေယျ့ ဝနျဆောငျမှုနဲ့ အငျအားမှာကြ ဖွညျ့တငျးမှု တှေ ထငျသလောကျမရဘူး။ Q စငျတာအသဈတှတေိုးခြဲ့နပေမေယျ့ လူနာလကျခံမှုအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးလို မွောကျဥက်ကလာဆေးရုံကွီးလိုနရောတှမှောတော့ ထူးထူးခွားခွားမဖွဈလာဘူး။ ကိုဗဈစဖွဈကတညျးက လူနာတှအေမြားကွီးလကျခံနရေတဲ့ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးအရေးပျေါကုသမှုဌာန ကိုဗဈ လကျခံနရောဟာ အစကတညျးကနေ အခုခြိနျထိ ဒီအတိုငျးပဲ။ အခုဆိုရငျ ဆေးရုံရောကျ တာနဲ့ နညျးနညျးလေး သံသယရှိနရေငျတောငျ တခွားအရေးပျေါကုသမှုတှထေကျအရငျ ကိုဗဈစဈဆေးရတယျ။ စဈဆေးမှုကလညျး ခကျြခွငျးမဟုတျ ရကျနဲ့ခြီစောငျ့ရတယျ။ သမေယျ့လူနာဆို ပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ သပေတေော့ပဲ။ ဒီတော့ လူနာတှခေမြာ နှဈထပျကှမျးနဈနာရရှာပါတယျ။
လူနာတှအေိမျမှာကြိတျမကုစခေငျြရငျ ဆေးရုံကို တကယျအားကိုးလို့ရတဲ့ နရောတဈခုအဖွဈ လာစခေငျြတယျဆိုရငျ ဒီဟာလေး တှကေို ပွုပွငျပေးလို့ရတာပဲ။
၁။ ဂြီပီတှအေတှကျ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ ဝနျထုတျဝနျပိုးကို အတူထမျးပေးနိုငျမယျ့ ဗြူဟာနဲ့ နညျးစနဈတှခေမြှတျပေးပါ။ လူနာတှမှော ဆေးခနျးသှားခငျြကွရှာပါတယျ။ ဆရာဝနျတှလေညျးကုသမှုပေးခငျြကွရှာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှ စနဈတကမြရှိ တဈကြောငျးတဈဂါထာဖွဈနတေော့ ကုရမှာလား ပိတျရမှာလားမသိဖွဈနကွေရတယျ။
၂။ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတှရေဲ့ အငျအားကို ယူပေးပါ။ သူတို့ကို ကုသဖို့အတှကျ ညှနျကွားခကျြတှထေုတျပေးပါ။ ဆေးရုံလိုနရောမြိုးကို လူနာတဈယောကျတှတေ့ာနဲ့ အကုနျပိတျဆိုတာမြိုးက အဓိပ်ပါယျမဲ့ပါတယျ။ ကိုဗဈစဈဆေးမှုတှလေုပျနိုငျအောငျ ခှငျ့ပေးပါ။ အရမျးရှုပျထှေးတဲ့စဈဆေးမှုတှလေုပျနိုငျနကွေတဲ့သူတှကေို ကိုဗဈလိုအရာမြိုး စဈဆေးခှငျ့မပေးဘူးဆိုတာ နညျးလမျးမကဘြူး။
၃။ စငျတာအသဈတှတေိုးခြဲ့သလိုမြိုးပဲ ရှိရငျးစှဲနရောတှရေဲ့ အငျအားတှေ၊ ဝနျဆောငျမှုတှကေိုလညျး တိုးခြဲ့ပေးပါ။ ဘကျဂကျြအကနျ့အသတျမဲ့သုံးစှဲမယျပွောပွီး စုတျပွတျသတျနတေဲ့အရေးပျေါဌာနတှကေတော့ ဒီအတိုငျးပဲဆိုတာ တျောတျောကွညျ့ရဆိုးပါတယျ။
ဘယျသူမှတော့ အိမျမှာနပွေီး အသမေခံခငျြပါဘူး။ ကုသမှုတှရေမယျဆိုရငျ အဆငျပွမေယျဆိုရငျ ဆေးရုံသှားကွမယျ့သူတှခေညျြးပဲ။ ဒါပမေယျ့အခုဖွဈနတေဲ့အနအေထားတှေ မွငျကွားသိနရေတာတှအေရတော့ ကြှနျတျောအခုခြိနျ တဈခုခုဖွဈလညျး အိမျမှာပဲ အသခေံသှားဖို့ရှိပါတယျ။ ဒါပါပဲ။ (ဒေါကျတာသူရိနျလှိုငျဝငျး)